China Akwa mma IP65 4x200w 800w COB Led blinder light Nlụpụta na ụlọ ọrụ | Efe
Igwe dị elu dị elu IP65 4x200w 800w COB Led blinder light
Igwe dị elu dị elu IP65 4x200w 800w COB Led blinder light bụ ike 800W & ọkụ na -enwu enwu n'èzí Led blinder, ezigbo mma kwụsiri ike na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 0 mkpesa mgbe erechara ya n'ahịa ihe karịrị afọ anọ. Anya nke ọ bụla bụ 200W COB led nke na -enye otu agba ọcha ma ọ bụ CW/WW 2in1 na nhọrọ. Enwere ike iji anya tụgharịa anya ọ bụla na 26 °.
Nkwado akuku obosara 55 ° site na ihie dị elu nwere ike ịsacha nnukwu mpaghara., Họrọ oke agba site na ọwa dị. Ezi mgbada mgbachi nwere mkpọtụ efu na obere mkpọtụ. Data LUX @ 3M zuru ezu bụ 6200
Nke a bụ ọkụ na -enwu mmiri na -enwu enwu dị elu nke ukwuu, ejiri ya na 2018 Korea Winter Olympic Games na -arụ ọrụ na -25 degrees centigrade gburugburu ebe obibi okpomọkụ. Ọ bụ ngwaahịa na -eme mkpesa efu efu kemgbe amalitere ire ya n'ahịa na 2017
Ngwa anya Mwube
Isi mmalite 4pcs 200W COB White 6000k na ọcha 3200k 2in1 led Ngosipụta Aka Ngosipụta
Beam n'akuku 60 Celsius Nbanye data/oghere 3-pin XLR ntọala
Oriri Ike 800W Socket Ike Powercon waterproof na -apụ/apụ
Njikwa Ogo nchedo IP65
Ụdị Njikwa Dmx512/na -agba ọsọ na -akpaghị aka/ohu nna ukwu/ụda na -arụ ọrụ Nkọwapụta
Ọnọdụ DMX Ọwa 2/9/16 Akụkụ 420x420x155mm;
Atụmatụ NW 12.5 n'arọ
Fan agba ọsọ dị ka ada okpomọkụ Ngwugwu ọkọlọtọ: katọn; Ikuku ụgbọ elu na nhọrọ
A na -agụsị bracket na 10 Celsius
E nwere ike idozi ihie dị elu na ụcha okpomọkụ Asambodo
0-100% eriri kwụ ọtọ na-agbanwe agbanwe OA, ROHS
Ajụjụ: Ọ bụrụ na nsogbu m zụtara nwere nsogbu, gịnị ka m ga -eme?
Re: Ngwa niile anyị na -enye akwụkwọ ikike afọ abụọ, mgbe ọkụ nwere nsogbu, nke mbụ, biko kpọtụrụ ahịa wee nye anyị nkọwa gbasara nsogbu ahụ site na nkọwa, foto ma ọ bụ vidiyo. Anyị ga -ekwurịta okwu ngwa ngwa ma nyere gị aka dozie nsogbu ahụ ma zitere gị akụkụ ahụ mapụtara. Ọ bụrụ na ngwaahịa ejighi akwụkwọ ikike, anyị ga -eme otu ụzọ nkwukọrịta, a na -akwụ ụgwọ akụkụ ahụ dị iche iche.
Ajụjụ: A na -anwale ọkụ gị nke ọma tupu ebuga m?
Re: Ee, 100% n'ezie ọkụ niile bụ QC gafere ma bụrụ nke ICQ nwalere nke ọma, ihe karịrị awa 48 ule ịka nká, ule mkpọtụ, ule ịma jijiji na ule okpomọkụ dị elu.
Nke gara aga: 2021 ngwaahịa ọhụrụ 2000W Led strobe na -akpụgharị isi ọkụ ọkụ ọkwa ọkachamara ọkachamara
Osote: Ọkụ na -ere ọkụ Obere osisi na -akpụgharị isi ọkụ ọkụ nwere 250W 311W na 380W ike